Nkuzi si na ihe omuma ihe esi ewepu otutu ama ama ama si Wikipedia
Ebe nrụọrụ weebụ dị omimi were eji robots. faịlụ txt iji dozie ma chịkwaa ihe ọ bụla na-eme. A na-echebe saịtị ndị a site usoro nchịkọta weebụ na atumatu iji gbochie ndị na-ede blọgụ na ndị ahịa na ịpịa saịtị ha. Maka nmalite, web scraping bụ usoro nchịkọta data site na weebụsaịtị na ibe weebụ ma na-echekwa ma na-azọpụta ya na formats.
Inweta data bara uru sitere na weebụsaịtị nwere ike ịbụ ọrụ na-agwụ ike. Iji mee ka usoro nchịkọta data dị mfe, webmasters na-eji robots nweta ozi dị mkpa ngwa ngwa o kwere mee. Ebe di omimi di iche iche bu 'ekwe' na ntuziaka 'disallow' nke nagwa ndi robots ebe anara ihe ngbado na ebe ebe.
Ichapu saịtị ndị a ma ama na Wikipedia
Nke a nkuzi na-ekpuchi ihe ọmụmụ nke Brendan Bailey duziri na saịtị ntanetị na Intanet.Brendan malitere site na nakọtara ndepụta nke saịtị kachasị ike na Wikipedia. Ebumnuche Brendan bụ iji chọpụta ebe nrụọrụ weebụ na-emeghe iji weghachite data weebụ site na robot. txt iwu. Ọ bụrụ na ị ga-ehichapụ saịtị, tụlee ileta usoro ọrụ nke weebụ iji zere ikike nwebisiinka.
Iwu nke saịtị na-eme ihe ike
Site na ihe nnweta data weebụ, nchịkọta saịtị bụ ihe pịa. Nkọwa zuru ezu banyere otú Brendan Bailey si debe saịtị Wikipedia, na njirisi ndị o ji mee ihe a kọwara n'okpuru ebe a:
Dịka nchọpụta nke Brendan si kwuo, a na-ejikọta ebe nrụọrụ weebụ kachasị ewu dị ka Ngwakọta. N'ihe dị na chaatị ahụ, ebe nrụọrụ weebụ na ngwakọta nke iwu na-anọchi anya 69%. Google robots. Txt bụ ihe atụ magburu onwe ya nke ndị robots agwakọta. txt.
Kwekọrịta zuru ezu, n'aka nke ọzọ, akara 8%. N'okwu a, Complete Allow pụtara na ígwè ọrụ ntanetị. faịlụ txt na-enye mmemme nke akpaghị aka iji kpochapụ saịtị ahụ dum. SoundCloud bụ ihe nlereanya kacha mma ị ga-ewere. Ihe atụ ndị ọzọ nke saịtị zuru ezu na-agụnye:
ndi mmadu. net
Ebe nrụọrụ weebụ na "Adịghị Ntọala" gụrụ 11% nke ọnụ ọgụgụ niile dị na chaatị. Enweghị Set pụtara ihe abụọ na-esonụ: ma saịtị enweghi ígwè ọrụ uhie. faịlụ txt, ma ọ bụ saịtị enweghị iwu maka "Onye ọrụ-ọrụ. "Ihe atụ nke ebe nrụọrụ weebụ ebe robots. faịlụ txt "Adịbeghị" gụnyere:
Na-ebi ndụ. com
Disallow zuru ezu
Ngalaba Disallow zuru ezu machibidoro mmemme nke ngwa ngwa site n'iwepu saịtị ha. Linked In bụ ezigbo ihe atụ nke saịtị Disallow zuru ezu. Ihe atụ ndị ọzọ nke saịtị Disallow zuru ezu gụnyere:
Nchịkọta weebụ bụ ngwọta kasị mma iji wepụ data. Otú ọ dị, iwepụ ụfọdụ ebe nrụọrụ weebụ dị ike nwere ike ịdata gị n'oké nsogbu. Nkụzi a ga-enyere gị aka ịmatakwu banyere robots. faịlụ txt ma gbochie nsogbu nwere ike ime n'ọdịnihu Source .